काठमाडौं। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले एकता कार्यदलले गरेको १० बुँदे सहमति अनुसार नै पार्टीलाई एकतावद्ध गर्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा एमाले एकताका लागि प्रयास गरिरहेका सांसदहरूले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा रावलले अहिले आफुहरू एकताको नजिक रहेकाले कार्यदलले जुटाएको सहमतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्।
विगतका गल्ती कमजोरीलाई समीक्षा गर्नुपर्ने र समयसँगै अब अन्तरविरोधहरू कम गर्दै लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले रावलले १० बुदे सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गरेको र यसलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि सांसदसँग आग्रह गरिएको बताए। रावलले अब नेकपा एमालेभित्र कुनै विवाद नभएको पनि बताए। चित्त नबुझ्दा नबुझ्दै पनि कोही दुई पाइला, कोही तीन पाइला हटेर सहमतिमा पुगेको उनले बताए।
उनले भने, ‘अघि सुवास कमरेड (सुवास नेम्वाङ) ले भनेजस्तै हामीले पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता दुवैजनालाई यो सहमति गर्ने आरम्भ चरणदेखि अन्तिम बिन्दुसम्म सम्पूर्ण कुराको जानकारी गराएका छौं। उहाँहरूलाई सो कुराको जानकारी गराउनुको साथ साथै सहमति गर्नु पूर्व अन्तिम बिन्दुमा जानकारी गराएका छौं। केही बुँदाहरूमा यहाँ यस्तो भए हुन्थ्यो भन्ने भनाई अवश्य रहेका हुन्। मेरा पनि केही अडान छन्, सुवास कमरेडका पनि छन्, अरू कमरेडका पनि छन्। सबैको अडान कायम राखेको भए आज यसरी सहमति हुने थिएन।’
रावलभन्दा अगाडि सुवास नेम्वाङले सम्बोधन गरेकाले नेम्वाङका केही भनाइहरूको सापटी लिँदै नेता रावलले सम्बोधन गरेका थिए। उनले पार्टीको आगामी महाधिवेशनका लागि सदस्यता वितरण तथा पार्टीमा थप केन्द्रीय सदस्य थपका लागि पनि कार्यदलले काम गर्ने उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘यति धेरै सहमति भइसकेपछि अब हामीले के का लागि विवाद गर्ने ? के का लागि मतभेद गर्ने ? सिद्धान्तका लागि मतभेद गर्ने हो भने जनताको बहुदलीय जनवादका बारेमा कसैले प्रश्न उठाएको देखिँदैन। कार्यक्रममा विवाद छ भने समाजवाद प्राप्तिका लागि दलाल पुँजीपति वर्गविरुद्ध संघर्ष गर्दै जाने भन्ने अठोटमा कसैले बहस गरेको देखिँदैन। नीतिको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, सामाजिक नीतिको बारेमा कुनै विवाद गरेको पाइँदैन। समावेशी लोकतन्त्र, समानता, न्यायका लागि लड्ने हाम्रो पार्टीको प्रश्न हो त्यसमा पनि प्रश्न छैन। केहीमा पनि प्रश्न छैन भने के भनेर लड्ने ?’